Way Adag Tahay Inaad Lacag Ku Samato Suuqgeyn La Wadaaga? - Baro Blogging Khabiir
Way Adag Tahay Inaad Lacag Ku Samato Suuqgeyn La Wadaaga?
Qeybta boostada:Suuq geynta / Kasbo Lacag Online
Waqtiga akhriska:5 Daqiiqado akhri
Suuqgeynta gacansaarka ayaa ku saabsan suuqgeynta wax soo saarka. Waxaad alaabta ka qaadaysaa dhagaystayaasha hortooda, sharax sifooyinka- sida faa iido ugu jirto iyaga badeecadaas? hadday ka helaan, iyagu waxbay iibsadaan, iibkoodana wax bay ku iibsadaan, waxaad heleysaa guddi. Tani waa fikrad fudud oo ku saabsan suuq geyn la shaqeysa.
Ma aha wax adag laakiin habka ugu fudud ee lacag looga sameeyo suuq geynta isbarbar dhiga qaabab kale oo dakhli loo soo saaro. Waxaad ku kasban kartaa wax weyn dadaal yar. Dhab ahaan, waa inaad beegsataa dhagaystayaasha saxda ah, dadka si gaar ah u raadinaya sheyga waa inay u baahdaan.
Dhageystayaasha saxda ah ayaa ugu muhiimsan. Dadka qaarkiis xitaa waxay kala shaandheeyaan dhagaystayaasha oo ay bartilmaameedsadaan mar dambe si ay u kordhiyaan heerka beddelka. Shaandhaynta dadka waa fikrad la soo saaray oo loogu magac daray masaafada.
Waxyaabaha qaarkood, waa inaad daryeesho si aad uga dhigto mid fudud oo adag si aad lacag u sameyso. aan ka doodno.
Komishanka gacansaarka siiya shirkadaha
Beegsiga Iibsadayaasha ku habboon
Ka Samee Lacag Suuqgeynta Shirkad Sahlan Si Fudud Oo Guul Leh
Maxay u adkaatay?
Oo ay la socdaan dhagaystayaasha saxda ah, ma diidi kartid muhiimada boqolkiiba. Shaki kuma jiro, Waxaan arkay dhowr boqol oo qof oo tusaale ah kuwaas oo ah abuurid ka badan $2000 bishiiba si fudud ula leh shirkadaha Amazon.
Si kastaba ha noqotee, guddiyada kale ee shirkadaha siiya kama weyna la-hawlgalayaasha Amazon. Amazon waxay bixisaa oo keliya 8 ku 10% guddiga ugu badan halka, shirkadaha sida Clickbank oo diyaar u ah inay bixiyaan 60% ee komishanka alaabta. Marka, Waa inaad caqli yeeshaa intaad soo qaadanayso nooca saxda ah ee sheyga iyo heerka komishanka.
Waxa cusub oo bilow cusub sameeyaa waa- kaliya abuuro websaydhka ku-xidhan ee soo-saar waxyaabo aan qancin, boggooda internetka oo ay hadda bilaabaan dhiirrigelinta. Ma fahmin muhiimadda iibsadayaasha saxda ah. Tani waxay si dhab ah uga dhigeysaa iyaga mid adag inay lacag ka helaan internetka.
Bartilmaameedka saxda ah waa wajiga ugu muhiimsan ee guusha suuqgeynta ku xiran. Waxaan arkay kiisas dhowr ah markay dadku u soo bandhigaan wax soo saarkooda dadka aan xiiseyneynin.
Tusaale ahaan - Marka qof uu raadinayo kursi oo aad dhiirrigeliso astaamaha taleefanka gacanta, tani gebi ahaanba waa wakhti lumis, tamarta, shaqo adag oo runti waa ku niyad jabaysaa waxayna kugu adkeyneysaa inaad lacag ka kasbato suuq geyn la shaqeysa.
waan xasuustaa, markii aan bilaabay suuq geyn la shaqeynta waxaan sameeyay mareeg aad u qurux badan. Waxaan si wada jir ah uga wada shaqeynay abuurista tayo iyo waxyaabo qanciya. Waxaan u tagnay raadinta faahfaahsan ee ereyada muhiimka ah ee tartanka Semrush, iyo Google autocomplete. Waxaan ku dhowaad 40 + maqaalada si joogto ah 2 bilood.
Waxaan si buuxda diiradda u saareynay bartilmaameedyada dabiiciga ah. Waxay ka dhigan tahay markii qof wax qoro “laptop fiican hoos 1000 dollar”. Waa inay soo booqdaan maqaalkeena baloogyada loo yaqaan “laptop fiican hoos 1000 dollar”.
Runtii waxa aan qabaneyno waa- waxaan beegsaneynaa dhagaystayaasha saxda ah. Waxay ka dhigan tahay qof ayaa raadinaya a “laptop wanaagsan hoosta 1000 dollar”, waana u adeegaynaa iyaga si lamid ah. Halkan, kiiskan, heerka beddelku wali wuu sarreeyaa maalmahan.
haddii qof uu weydiiyo laptop-ka ay khusayso. Ma iibinayno ama ma tusayno wax kale.
Dadku waxay qaataan caawinta Facebook, Twitter, iwm. si loogu socodsiiyo taraafikada degelladooda ilaha kala duwan ayna ku dhammaato wax iib ah. Sababta ayaa ah- Taraafikada aad ka helayso baraha bulshada, halkaas, yaa garanaya qof raadinaya laptop gaar ah malaayiin qof.
Laakiin haddii aan ka hadalno raadinta Google, qof ayaa si gaar ah u qoraa ereyga muhiimka ah wuxuuna ku helaa natiijooyinka sida ugu habboon. Marka taasi waa sababta sicirka beddelka uu u sii sarreeyo marka la beegsanayo makiinadaha raadinta marka loo eego tan warbaahinta bulshada.
Si kastaba ha noqotee, ma diidi kartid laba fursadood. Mid ayaa ah in la bartilmaameedsado dhagaystayaasha saxda ah ee kooxaha warbaahinta bulshada. Waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad ku biirto kooxaha ku habboon oo aad la wadaagto maqaalkaaga ugu habboon.
Xulashada labaad ayaa ah inaad u tagto xayeysiisyada lacagta lagu bixiyo. Facebook wuxuu kuu ogolaanayaa inaad bartilmaameedsato koox da 'gaar ah iyo sidoo kale dhagaystayaasha daneynaya. Waxay ku tusi doontaa boggaaga xayeysiinta boostada kuwa isticmaala kuwa daneynaya laptops (tusaale ahaan). Laakiin halkan waa xaddidaadda mar labaad, ma ogin waqtiga iibsiga iyaga. Hadday wax iibsadeen ama ay doonayeen inay wax iibsadaan ama ay xiiseeyaan oo keliya inay helaan aqoonta tikniyoolajiyadda socda.
Hab kale oo lacag fudud looga helo iyada oo loo marayo suuq-geyn ku-xirnaansho adigoo abuuraya funnels-ka gujinaya. Riix riix ayaa asal ahaan kala shaandheeynaya dadka raadinaya sheyga.
Waxa ay sameeyaan waxay u aadaan xayeysiis lacag leh ama taraafikada dabiiciga ah. Markuu qof booqdo websaydhkooda, waxay soo bandhigaan dhammaan astaamaha sheygaas kor u qaadista gaarka ah waxayna weydiinayaan faahfaahinta aasaasiga ah ka hor intaadan bilaabin. Inta hawshu socoto, waxay qabsadaan emaylkaaga, ka dib u gudub tallaabada labaad ka dibna saddexaad. Kadib markaad dhamayso talaabada labaad, waxay u guureen bogga lacag bixinta ee ugu dambeysa.
Waa maxay xaqiiqda halkan ka socota ayaa ah, waxay kala soocayaan dadka xiiseynaya. Si aad u sii cad, haddii 100 dadku waxay booqdaan degel si ay u akhriyaan sifooyinka alaabta, boqol ka mid ah, 30 dadku way buuxin doonaan faahfaahinta aasaasiga ah, geli emaylkooda.
Ka baxay 30, kaliya 5 dadku waxay u dhaqaaqi doonaan bogga lacag bixinta. Waxay noqon karaan ama aysan noqon karin wax iibsasho deg deg ah. Laakiin waxay muujiyeen xiisaha mulkiilaha degelka. Waxay xiiseynayaan sheygaas laakiin diyaar uma ahan inay bixiyaan waqtigaas.
Hada waqtiga xiga, isagoo ka tagaya dhamaan boqol qof, dhagaystayaashaada saxda ahi waa shan qof oo keliya. Haddii aad ka hesho guddi hufan badeecad gaar ah. Waad ku dhufan kartaa guddigaas adoo 5. Haddii guddigaagu ka badan yahay $100 cusbo, markaa si fudud ayaad qiyaasi kartaa sida ay u fududahay in lacag looga sameeyo suuqgeynta gacansaarka.
Suuq geynta (iyo Sida Loo Bilaabo)
Waxa Kuwa Kale Akhrinayaan?
Miyaan ku dhisi karaa degel WordPress aan lahayn Domain?
Ardaygu Miyuu Ku kasban karaa Lacag Online ah
Sida loo Abuuro Bog WordPress ah oo aan marti gelin?
Post HoreImmisa lacag ah ayaad ka sameyn kartaa Blog Blog?
Post NextImmisa lacag ah ayaad ku samayn kartaa Google AdSense?
Miyuu Suuqgeynta Affiliate Amazon u qalantaa?
Immisa lacag ah ayaad ku samayn kartaa Google AdSense?
Sida Loo kasbado $ 1000/m suuq geyn laxiriira: 6 Talaabooyinka Fudud